ရေ ထဲကလူ(၁) ~ MSU Portal
11/26/2013 10:17:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION No comments
ဒီအလုပ်ကိုစခဲ့တာမှ မဟုတ်သာ ..
'သ င်္ဘောသီး ' တဲ့
'သ င်္ဘောသား' ရောဂါတဲ့
ရေဘဲကြီး တဲ့ဗျာ ...
ဒီပင် လယ်မှာ ဘယ်သူပျော်မှာလဲ
လေ တွေရှု ရင်းက
တချို့ ကသ င်္ဘောပေါ်ကဆင်းဘို့
တခါတခါတက် ရလွယ်သ လောက်
သံပြားပေါ်မှာအသက် ရှင်နေ ပေ့မယ့်
တကယ်တိုင်းကျတော့..,.ငါ့
ကုန်းပေါ်မှာဘဲသေချင် သူပါ။ ။ ။ ။
Posted in: Fun,guide,knowledge,literature,poem
MEO Class I ,MEO Class I+II , MEO Class III သင်တန်...
Vindskip Ship Concept: Using Hull To Harness Wind ...
လူငယ်တစ်ဦး လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ဖို့ ဆိုသည်မှာ ( လူငယ...
ဆာကူရာ.. နှင့် ပြင်ဦးလွင်..က..ဘုန်းကြီးကျောင်းသား...
အီတလီတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သင်္ဘောတစ်စင်းကို ဆယ်တင်မှု...
မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်သို့ သင်ထောက်ကူပ...
Certificate File for Mariners
သဘက်ခါတစ်ခုမှာ . . . ကိုပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်
BE ဘာကြောင့် ..အရင်လို..အချို့..Subject တွေမှာ..Ex...
အီလက်ထရွန်နစ် နည်းပညာသင်ယူမှု ကမ္ဘာ့ရေကြောင်းတက္ကသိုလ...
အငှားယဉ်ပေါ်တွင် မေ့ကျန်ခဲ့သော သဘောင်္သား ပက်စပို့ နှ...
သဲတင်သင်္ဘော၏ သဲလှောင်ကန် အတွင်း လူတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆ...
အိမ်မက်ထဲက သင်္ဘောသားကြီး (၄)
MSU သို့ ပေးပို့ လာသော စာတစ်စောင်...
ကိုရွှေသင်္ဘောသီးနဲ့ Taxi ဆရာ
ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာများရဲ့ဘားထောက်မှာ ဘာကြောင့် ...
သင်္ဘောသား မိသားစုဝင်များ ၏ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
Marine: Australasia&Africa HD for Iphone and Ipad ...
Marine Boilers Questions & Answers
အထွက် ၊ အဝင် အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ
Seamen 's Voice